Tag: ịnye ọnụahịa | Martech Zone
Tag: ịnye ọnụahịa
Dị ka ụwa nke oge a na-etinyewanye mkpa na ọsọ na mgbanwe, ikike nke itinye ezigbo oge, ọnụego dị oke mkpa na ntuziaka ire ahịa n'ime ọwa ahịa ha nwere ike inye ndị azụmaahịa aka karịa ndị asọmpi ma a bịa n'ịtụle atụmanya ndị ahịa. N'ezie, ka ihe a na-achọ ịrụ ọrụ na-abawanye, otú ahụkwa ka ihe siri ike azụmahịa dị. Ọnọdụ ahịa na mgbanwe azụmaahịa na-agbanwe n'ike n'ike, na-ahapụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ ịzaghachi ọnụahịa na-akpata
Etu ọnụahịa ọnụahịa dị n'ịntanetị nwere ike isi metụta ịzụ akparamagwa
Monday, October 15, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ihe omumu banyere azumazu ahia bu ihe itunanya. Abụ m onye na-azụ ahịa n'ịntanetị ma na-atụkarị m anya na ihe niile m zụtara na achọghị m n'ezie mana ọ dị oke mma ma ọ bụ na ọ dị oke mma ịgafe! Ihe omuma ihe omuma a sitere na Wikibuy, 13 Psychological Pricing Hacks to Increase Sales, na-akowa mmetụta nke ịnye ọnụahịa na etu esi azụta omume na obere obere tweaks. Nye ọnụahịa psychological bụ irè
Gaa na wara wara nke ụlọ brik-na-ngwa agha ụlọ ahịa na ohere, ị ga-ahụ onye na-azụ ahịa na anya ya kpọchiri na ekwentị ha. Ha nwere ike na-atụnyere ọnụahịa na Amazon, na-arịọ enyi maka nkwanye, ma ọ bụ na-achọ ozi gbasara otu ngwaahịa, mana enweghị mgbagha na ngwaọrụ mkpanaka abụrụla akụkụ nke ahụmịhe anụ ahụ. N'ezie, ihe karịrị pasent 90 nke ndị na-azụ ahịa na-eji ekwentị mgbe ha na-azụ ihe. Rị elu nke mkpanaka
7 Strategies Jiri na ricnye ọnụahịa ọgụgụ isi kọwaa
Tuesday, June 30, 2015 Monday, June 29, 2015 Douglas Karr
Na IRCE, enwere m ike ịnọdụ ala na Mihir Kittur, ngalaba-onye nchoputa na Chief Innovation Officer na Ugam, nnukwu usoro nyocha data nke na-enye ụlọ ọrụ azụmahịa ike ime ezigbo omume nke na-eme ka arụmọrụ ego na-abawanye. Ugam gosipụtara na ihe omume ahụ iji kwurịta ọnụahịa na otu ụlọ ọrụ ga-esi zere agha ọnụahịa. Site n'iji ihe omuma ahia ndi mmadu anakọtara na ntanetị ma wuo ha n'ime usoro onu ahia nke ndi ahia, Ugam enwewo ike ime ka oru di otua site